Congo (RDC): Ny vokatry ny tsy firaharahiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Janoary 2010 8:49 GMT
Mahafinaritra ny Congoblog. Mendrika daholo ny lahatsoratra tsirairay, indreto ny tena nanaitra hatramin'ny fiatombohan'ny volana janoary teo:
avy any Kisangani, Boyomais mitaraina ny amin'ny zavatra mampalahelo iainana any amin'ny toeram-pitsaboana ao amin'ny fireneny, tafiditra amin'izany ny teny baiko fantatry ny rehetra hoe: “tsy misy vola, tsy misy fitsaboana”.
Nataon'i Luba ho an'ny Congoblog.net
Vadina marary iray no mitaraina:
Tsy mahita tory zahay amin'ny alina fa be moka be. Marary vavony ny vadiko kanefa tsy mahagaga raha mety ho voan'ny tazo koa izy ato amin'ny hopitaly. Tsy misy ilana azy intsony ny lay fiarovana amin'ny moka ato amin'ny hopitaly fa efa feno lavadavaka.
Avy any an-drenivohitra, Mwana Kin milaza ny zavatra mampidi-doza vokatry ny tsy fanamboarana:
Nandritra ny taona maro dia novoaka avy any anaty tany any ny tariby mitondra herinaratra an'ny SNEL ka mandady eran'ny lalana rehetra fivezivezena ao an-tanàna. Amin'ny fotoanan'ny orana dia misy hiharan-doza foana vokatry ny fipoahan'nymitondra herinaratra mifangaro amin'ny fantsona mitondra rano maloto.
Kanefa efa manantona ny fifidianana amin'ny taona 2011, Cédric Kalonji milaza fa:
Tsy nisy nivoaka ny boaty nasiana azy ny ankamaroan'ny fampanantenana natao mialohan'ny fifidianana tamin'ny taona 2006. Mahafantatra ny olona ankehitriny fa voafitaka. Tsy vendrana anefa izy ireo fa efa mieritreritra ny ho tohin'ny tantara ny manam-boninahitra sy ny lehibe rehetra. Mety daholo ny fomba rehetra hitazonana ny seza mbola mafana, hialana amin'ny sorisory mpahazo ny Congolais tsotra amin'ny fiainana andavanandro.